ताल Tiberias - ताजा पानी सबै भन्दा ठूलो स्रोत। गालील आकर्षण
ताल Tiberias (गालील समुद्र - यसको अन्य नाम) इस्राएलमा अक्सर Keener भनिन्छ। यसको तट - विश्व मा भूमि को सबै भन्दा कम क्षेत्रको एक (को समुद्रहरू को स्तर को सम्बन्ध मा)। पौराणिक कथा अनुसार, 2000 वर्षअघि Iisus Hristos यसको किनारा प्रवचन पढ्न, त्यो मरेको उठाएको र दीनदुःखी निको पार्नुभयो। साथै, पानी मा हिड्ने हो। ताल सबै इस्राएलका लागि अलवण को मुख्य स्रोत हो।
ताल नाम को इतिहास
ताल Tiberias (अहिले Tiberias) Tiberias शहर देखि यसको नाम लिन्छ। यसलाई अन्य नाम भए तापनि। उदाहरणका लागि, प्राचीन समयमा गालील समुद्र रूपमा उहाँलाई तिनीहरूले बताउनुभयो। त्यहाँ क्षेत्रको लागि अर्को नाम हो - Gennesaret को लेक। आधुनिक समयमा यो अक्सर गालील समुद्र भनिन्छ। मूर्तिपूजक देवताहरूका Quinara को सम्मान मा - एक संस्करण अनुसार, यो यसको नाम Kinor भनिन्छ सांगीतिक साधन देखि, अन्य मा हुन्छ।
ताल Tiberias को गोलान र गालील बीच, इस्राएलका उत्तर-पूर्वी मा स्थित छ। यो सिरियाको-अफ्रिकी दरार को उत्तरी भाग मा स्थित छ। 213 मीटर द्वारा समुद्रहरू को स्तर तल आफ्नो बैंकहरू। ताल को क्षेत्र - 165 वर्ग किलोमिटर, गहिराई - 45 मीटर। यसको तट 60 किलोमिटर लम्बाइ छ। शहरको पश्चिमी पक्षमा Tiberias निर्माण गरिएको छ।
कि गोलान हाइट्स मा सुरु गिरावट धेरै नदीहरू मा गालील समुद्रको उत्तरी छेउमा। तिनीहरूलाई को - यर्दन दक्षिण जलाशय देखि बगिरहेको। गालील समुद्र ग्रह मा सबै भन्दा कम प्रवाह अलवण ताल मानिन्छ।
गालील समुद्र को सुविधाहरू
ताल Tiberias - इस्राएलमा प्रमुख व्यापारिक साइटहरू मध्ये। अब तिनीहरूले हरेक वर्ष माछा लगभग दुई हजार टन पक्रेको हो। यो 20 प्रजाति भन्दा बढी कुल inhabits। र यस्तो सार्डिन माछा वा kineretskaya Tilapia (सेन्ट पत्रुसको माछा) को रूपमा केही, मात्र गालील समुद्र बाँचिरहेका छौं।
कहिलेकाहीं ताल किनारमा को hordes आक्रमण आगो चींटियहरुलाई। यसको सतह सामान्यतया शान्त छ, तर त्यहाँ सानो अचानक आँधीबेहरी छन्। पानी कारण तालाब को फेदमा basaltic बालुवा गर्न गाढा नीलो छ। र यो ताजा छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो एक मामूली नूनिलो स्वाद छ।
एक पौराणिक कथा को भाग रूपमा गालील
गालील समुद्र (इजरायल) पुरानो नियममा उल्लेख गरिएको थियो। पौराणिक कथा अनुसार, Kfar नहूम (आज कफर्नहुम) को शहर मा नदी को बैंक, मा, Iisus Hristos बस्थे। ताल आफ्ना प्रेरितहरूलाई पत्रुस र अन्द्रियासलाई fished छ। Iisus Hristos यसको किनारा मा प्रचार गरे। र उहाँले यर्दन नदी ताल बाट बग्छ जहाँ पौराणिक कथा अनुसार, उहाँलाई बप्तिस्मा। यो स्थान Yardenit भनिन्छ। पुरातन समयका भएकोले तीर्थयात्रीहरू त्यहाँ भेला हुन्छन्। पवित्र मानिन्छ यस ठाउँमा पानी। तसर्थ, तीर्थयात्रीहरू अझै पनि त्यहाँ ablution उत्पादन र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्।
गालील समुद्र को किनारा मा के स्थलहरू छन्?
आकर्षण गालील तट साथ अवस्थित छ। उत्तरी छेउमा त्यहाँ एउटा सानो Franciscan चर्च छ। डाँडाको उपदेश भनिने पहाडी मा विहार छ।
गालील समुद्र (इजरायल), यसको kibbutzim लागि जानिन्छ। तिनीहरूलाई को - समुद्र तट मा Ein Gev -Located, Degania देखि 13 किलोमिटर। पहिले, सिरिया एक सीमाना थियो। यो अक्सर वार्षिक परम्परागत संगीत तिहार, ईस्टर हप्तामा बाहिर छ, जो होस्ट। तिनीहरूले Israeli र विदेशी कलाकारहरूको सबै भन्दा राम्रो संगीतकार आउँछन्। संगीत खुला आकाश मुनि स्थित छ जो एम्पिथियटर, आयोजना गरिन्छ।
दक्षिण पक्षमा, ताल देखि 1.5 मी, यर्दन को बैंक मा, एक यहूदी Kibbutz Degania छ। यसलाई युक्रेनी युवा को एक समूह द्वारा 1909 मा स्थापित भएको थियो। आफ्नो लक्ष्य युद्ध समयमा हिट थियो एउटा सानो सिरियाली ट्यांक छ।
ताल बाट टाढा तपाईं Beit She'an पुरातन रोमन शहर देख्न सक्छौं। को गोलान हाइट्स Gamla र ठूलो यहूदी rabbis को गम्भीर छन्। जहाँ यर्दन नदी कुण्डमा बग्छ, यो पानी आकर्षण भएको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गरे। को गोलान हाइट्स धेरै सुंदर झरने छन्। र यो क्रूसेडरों को Belvoir किल्ला नजिक स्थित छ।
के पर्यटकहरु लेक Tiberias आकर्षित?
गालील समुद्र को तट मा धेरै तटों छन्। तिनीहरूलाई केही भुक्तानी छन्। त्यहाँ धेरै तातो पानीको पोखरी, खनिज र सल्फर मा धनी छन्। तिनीहरूलाई केही चिकित्सा उद्देश्यका लागि पर्यटकहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ। ताल Gourmets आकर्षित जो स्वादिष्ट र दुर्लभ माछा, धेरै छ। सबैभन्दा खोजे-पछि र लोकप्रिय माछा - Tilapia।
पर्यटक धेरै आकर्षक आरक्षित Hamat Gader छन्। यसलाई जो स्नान संयुक्त दुखाइ र शरीर, छाला रोग र अन्य रोगबाट एक नम्बर व्यवहार तातो पानीको पोखरी, घरों। पानी त्यहाँ वर्ष राउन्ड 42 डिग्री मा तापमान राख्छ छ। मा पुरातात्त्विक उत्खनन समयमा Hamat Gader रोमन स्नान फेला परेन। र यो घर हरेक कल्पना प्रकारको 200 प्रजाति हो जो मध्य पूर्व कुकुरको खोर crocodiles, मा सबै भन्दा ठूलो छ।
गालील इस्राएलका सागर महत्त्व
गालील समुद्र - को सबै भन्दा ठूलो स्रोत ताजा पानी इस्राएलका लागि। यो देश को मुख्य जलाशय मानिन्छ। सबै इस्राएलका द्वारा खपत पानी को तेस्रो, Tiberias को ताल बाहिर लगियो। 1994 मा, इजरायल र जोर्डन राज्य बीच यो ताजा पानी 50 लाख घन मिटर द्वारा सालाना आपूर्ति छ जो अन्तर्गत एउटा सम्झौता हस्ताक्षर गरे। यो भन्दा गालील समुद्र देखि लिइएको छ। वितरण दुई देशहरू बीच स्थानीय संघर्ष को उद्भव समयमा पनि रोक्न छैन।
हालैका वर्षहरूमा Tiberias को ताल पानी स्तर मा एक कमी छ। र यसलाई खोक्रो छ भने, यो इस्राएलका, कठिन समयमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। कम पानी स्तर मृत सागर मा। र यो माथि उल्लेख रूपमा, गालील समुद्र देखि ठीक निम्नानुसार जो, यर्दन नदी, को पानी द्वारा खुवाउनुभयो छ।
गालील समुद्र पानी खपत को कमी मात्र भू-मध्य तट मा desalination बिरुवाहरु को निर्माण पछि सम्भव छ। या त तपाईं भूमिगत गर्न वेल्स अप ड्रिल गर्न आवश्यक छ। तर यी सबै काम गर्दछ यसको लागि आफ्नो निर्माण धेरै आवश्यक लागत र धेरै समय आवश्यक थियो, वित्तीय मामलामा धेरै असहज छन्।
Vasily Polenov, "गालील समुद्र मा"
कलाकार Polenov पूर्व आफ्नो यात्रामा गालील समुद्र आए। उहाँले येशू ख्रीष्टको बारेमा चित्रहरु एक श्रृंखला लेख्न योजना बनाए। त्यसैले Polenov मुक्तिदाता बस्ने व्यक्ति, प्रचार मा ऐतिहासिक साइटहरु हेर्न चाहन्थे र पानी मा हिंडे।
1888 मा पनि अल्छी मुक्तिदाता समर्पित श्रृंखला को दोस्रो तस्वीर लेख्न। उहाँले यो "ख्रीष्ट समुद्र किनारमा मा हिड्ने।" भनिन्छ अन्यथा - "। गालील समुद्र मा" त्यो अब Tretyakov ग्यालेरीमा प्रदर्शन गरिएको छ।
आफ्नो चित्रहरु लेख्न Polenov गालील समुद्र भ्रमण अनुभवलाई प्रयोग। यी स्थानहरू को सौन्दर्य र येशूले यहाँ हिंडे भन्ने विचार एक शान्त र एकै समयमा राजसी परिदृश्य मा सिर्जना गर्न मदत गरे। यसलाई आफ्नो शांत नीलो पानी र साना पहाड नजिकै संग ताल को "प्राण" झल्काउँछ। Polenov ताल को सौन्दर्य अनन्त, आदर्श वर्णन गरे।
दुनिया मा rarest जनावर। दुनिया मा rarest पशु
आस्ट्रेलियाई समुद्र बारुला गर्ने भनिन्छ? विशेष खतरनाक jellyfish अष्ट्रेलियन पानी
IPhone: मूल को देश। कसरी पहिचान गर्ने?
क्यासिनो "Korona": प्लेयर समीक्षा, मूल्याङ्कन, WINS
को प्रतिनिधि मास्को मा बिक्री को सुविधाहरू
त्यहाँ Ostankino टावर मा पर्यटन निर्देशित छन्?
विभिन्न चरणमा मा nulliparous मा वितरण कसरी लामो?
मीठो मिठाईहरू: 'को उम्लिरहेको पानी मा चकलेट'
जो "साहसी" को मतलब? शब्द को अर्थ "Sassy"
सीमित प्रतियोगिता को अवस्थामा प्रभाव शाफ्ट
Ulrika Eleonora - स्वीडिश रानी
देश मा नर्वे आकर्षण
इटालियन automaker Ferruchcho Lamborgini: जीवनी, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य